OPPO မှ မိတ်ဖက်များ၊ Developer များနှင့် ပူးပေါင်း၍ Multi-device နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား၍ ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံများ ရရှိစေရန် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် | OPPO မြန်မာ
OPPO မှ မိတ်ဖက်များ၊ Developer များနှင့် ပူးပေါင်း၍ Multi-device နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား၍ ဆန်းသစ်သော အတွေ့အကြုံများ ရရှိစေရန် တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော OPPO မှ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် 2020 OPPO Developer Conference (ODC) အခမ်းအနားကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် “ForaFuture of Convergence” ဟူသော ခေါင်းစဥ်နှင့်အတူ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် OPPO သည် ColorOS 11 ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်း၏ IoT Vision ဖြစ်သော “Enjoyasmart and wonder life” ဆောင်ပုဒ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ OPPO မှ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
OPPO ၏ Internet Services ဆိုင်ရာ Vice President နှင့် President ဖြစ်သူ Henry Duan က “ကျွန်တော်တို့လို ကမ္ဘာကို Hardware နှ Software ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံ ပေးအပ်နေတဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင် Developer တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အင်တာနက်အတွေ့အကြုံပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ဂေဟစနစ်သစ်တည်ဆောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်မှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်ပြီး Developer တွေ၊ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သုံးစွဲသူများကို ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့ အသိဉာဏ်ပြည့်ဝတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ယူဆောင်ပေးနိုင်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းထားတဲ့ အင်တာနက်ဂေဟစနစ်ကို စူးစမ်းရှာဖွေ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ColorOS သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် လစဉ်သုံးစွဲသူ သန်း ၃၇၀ ကျော်ရှိပြီး Applications၊ Services နှင့် Content Ecosystem များတွင် သုံးစွဲသူ အမြောက်အမြား စုဆောင်းရရှိခဲ့သည်။ Developer ၁၄၀,၀၀၀ ကျော်မှ OPPO Open Platform ကို အသုံးပြုကြပြီး OPPO မှ ပြုလုပ်ပေးထားသော Open Capabilities ကို တစ်နေ့လျှင် အကြိမ် ၁၈ ဘီလီယံ နှင့်အထက် အသုံးပြုကြသည်။ OPPO ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Application Ecosystem သည် လစဥ်သုံးစွဲသူပေါင်း သန်း ၃၃၀ ကျော်နှင့် နေ့စဥ်ဝင်ရောက် သုံးစွဲမှုပေါင်း ၁.၇ ဘီလီယံ နှင့်အထက်ရှိပြီး အဆက်မပြတ် တိုးတက်နေသည်။
System-level Capability Exposure Engines ၇ မျိုးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ System-level လုံခြုံရေးခိုင်မာစေရန် ပြုလုပ်ခြင်း သုံးစွဲသူများအား Android 11 ကို ပထမဦးဆုံး အသုံးပြုနိုင်သည့် OEM များထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့် OPPO သည် အသုံးပြုသူများကို ပိုမိုဆန်းသစ်သော နည်းပညာဆိုင်ရာများဖြင့် ချောမွေ့အဆင်ပြေသော နည်းပညာအတွ့အကြုံများကို ဖန်တီးပေးရန် မျှော်မှန်းသည်။
Developer များအား OPPO ၏ System-level Capabilities ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်စေရန် ColorOS မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးသော Engine ၅ ခု : CameraUnit ၊ MediaUnit, Hyper Boost၊Link Boost နှင့် ARUnit  အပြင် System-level Capibility Exposure Engine ၂ ခု ဖြစ်သော AIUnit နှင့် FusionUnit ကို ထပ်မံ ပြသခဲ့သည်။ ဤ Engine ၇ ခု မှတစ်ဆင့် ColorOS သည် Developer များ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံများကို ပိုမို ပြည့်ဝ ကောင်းမွန်လာစေရန် ကူညီပေးသည်။
ColorOS 11 သည် အကောင်းဆုံး ColorOS Edition ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အကန့်အသတ် မရှိသော ဒီဇိုင်းအယူအဆကို တိုးချဲ့ထွင်၍ သုံးစွဲသူများကို ချောမွေ့ပြီး Multi-device နှင့် Cross-scenario အတွေ့အကြုံများ ယူဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများ၏ Privacy နှင့် ဂေဟစနစ် လုံခြုံရေးကို ပိုမိုကာကွယ်နိုင်ရန် ColorOS 11 သည် Android 11 ၏ အသစ် ဖြည့်စွက်ထားသော Privacy Options များကို ထည့်သွင်း၍ ထပ်ဆောင်း Privacy Protection နှင့် Data Security လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ColorOS သည် Privacy Protection တွင် အမြင့်မားဆုံး စက်မှုလုပ်ငန်း စံချိန်စံညွှန်းကို ဖော်ဆောင်သော ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ စံချိန်စံညွှန်းမီ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ISO နှင့် ePrivacy မှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များလည်း ရရှိခဲ့သည်။
အဓိက Scenarios ၃ ခုမှ အသုံးပြုသူများအတွက် “ခေတ်မီ်၍ ပြီးပြည့်စုံသောဘဝ” ကို ယူဆောင်ပေးခြင်း Internet of Things ခေတ်ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အမျှ OPPO သည် သုံးစွဲသူများ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံ၍ Application Scenario ၃ ခု ဖြစ်သော ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေရေး၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် ပရိဘောဂများ၊ အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေး အစရှိသည်တို့ကို ဦးတည်၍ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ OPPO ၏ ကြွယ်ဝသော IoT ထုတ်ကုန်ပုံစံနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ဂေဟစနစ်တို့ကို ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် Multi-device နှင့် အသိဉာဏ်ရှိသော Cross-scenario ဘဝကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် OPPO သည် OPPO IoT ecosystem ကို ပိုမိုကြွယ်ဝစေရန် HeyTap Health Platform  ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် OPPO သည် “IoT Enablement Plan 2.0”  ကို ကွန်ဖရင့်၌ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဤအစီအစဥ်အရ OPPO သည် စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များအား ရှုထောင့် ၄ ရပ်ဖြစ်သော နည်းပညာ၊ ထုတ်ကုန်၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာများကို ရေရှည်ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉.၅ သန်းကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာတွင် ဦးဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်း၌ပင် HeyThings IoT Platform  ၏ စွမ်ဆောင်နိုင်မှုစနစ် ၅ ခုကို အသုံးပြု၍ OPPO သည် အခြေခံဗိသုကာပညာကို စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံအကြားရှိ အတားအဆီးကို ချိုးဖျက်ကာ သုံးစွဲသူများကို ခေတ်မီ၍ ပြီးပြည့်စုံသောဘဝကို ယူဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
OPPO ၏ ပထမဆုံးသော “IoT Enablement Plan” ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ODC တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းပညာ စွမ်းရည်များကို ဖော်ထုတ်ပြသခြင်းဖြင့် OPPO IoT Ecosystem သည် စတင် ရုပ်လုံးပေါ်လာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှ အမျိုးမျိုးသော စမတ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည့် OPPO Enco Series Acoustic ထုတ်ကုန်များ၊ OPPO Watch၊ နှင့် 5G CPE များကို အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းထဲတွင် လူသိများသော အမှတ်တံဆိပ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်နှင့်လည်း မိတ်ဖက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Terminal Categories ၅၀ ကျော်နှင့် စတော့ထိန်းသိမ်းရေးယူနစ် ၃၀၀ ကျော်ကိုလည်း မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Developer များကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ အပိုင်း ၃ ပိုင်းကို ဦးတည်ပြုလုပ်ခြင်း OPPO သည် အင်တာနက် ဂေဟစနစ်ကို တိုးမြင့်စေရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ OPPO Open Platform ကို Window အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုအဓိကာထား၍ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အတူ OPPO သည် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ အပိုင်း ၃ ပိုင်း ဖြစ်သော Applications၊ Services နှင့် Content များကို တည်ဆောက်၍ Developer များကို ထုတ်ကုန်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးကို လွှမ်းခြုံစေနိုင်သော One-stop ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Content စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စက်မှုလုပ်ငန်း ဦးဆောင်သည့် မိတ်ဖက်များ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့် တစ်ပေါင်းတည်းပင်ဖြစ်သည်။ OPPO နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြင့် Content Platforms များဖြစ်သည့် Vision နှင့် Dailymotion တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် OPPO Content Ecosystem သည် သုံးစွဲသူများ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး လစဥ်သုံးစွဲသူ သန်း ၂၈၀ ကျော်နှင့် နေ့စဥ် Content Impression ပေါင်း ပျမ်းမျှ ၁၀ ဘီလီယံကျော် ရရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် 5G ပိုမိုတွင်ကျယ်လာခြင်းနှင့်အတူ 5G နည်းပညာဖြင့် AI၊ AR နှင့် Cloud Computing အစရှိသည့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဆန်းသစ်သော အစီအစဥ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေမည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကို Software နှင့် Hardware ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံ ပေးအပ်နေသည့် နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် OPPO သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အာရုံစိုက်ကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးအမြတ်ရရှိစေမည့် စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကို ကျင့်သုံးပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Developer များနှင် မိတ်ဖက်များကို ပံ့ပိုးနိုင်ရန် ပွင့်လင်း မြင်သာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်၍ လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ Internet of Experience အခြေခံ ထားသော ဂေဟစနစ်သစ်ကို ဆက်လက် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
1 With the exception of CameraUnit and Hyper Boost, all engines are currently only available in China.
2 So far, the Platform is only available in China.
3 So far, the Plan is only available in China.
4 So far, the Platform is only available in China.
ရှေ့သို့ OPPO A53 မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ စတင်ရောက်ရှိ